Suuragal ma ahan in la dheereeyo duullimaadyada Bursaray | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaSuurtagal maaha in la kordhiyo dayuuradaha Bursaray
23 / 07 / 2012 16 Bursa, DUNIDA, tareenka, GUUD, Nidaamka Tareenka fudud (HRS), Headline, TURKEY
Akhristaha aan dooneynin in magaciisa la shaaciyo wuxuu farriin u diray geeskeenna wuxuuna codsi u diray BURULAŞ. 17 Bishii Juun, waxaan aqriyey maqaalka cinwaankiisu yahay "Ha loo duuliyo duullimaadyada BursaRay ilaa xNUMX saat waxaanan si kooban u aqriyay:
"Haddii ujeedadu tahay in la adeego oo muwaadiniinta laga rajeynayo inay si fudud u safraan, waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo Levent Fidansoy, Maareeyaha Guud ee BURULAŞ. Hadda waxaan ku jirnaa xilli xagaaga. Cimiladu waxay ku dhowdahay inay mugdi gasho agagaarka 21.30. Maalmihii ayaa sii socday oo waxaan bilownay safarradii galabtayada. In alla intii aan kari karno, waxaan isku dayeynaa inaan sameyno booqasho saaxiibtinimo oo aan ka qeybgalno nashaadaadyo bulsho iyo dhaqan. Tan darteed, jadwalka xagaaga iyo ugu yaraan 02.00'ye BursaRay duullimaadyada waa in la ballaariyo. Cimiladu waxay ku madoobaataa 21.30, laakiin gaadiidku wuxuu ku dhammaanayaa 24.00. Sidaa darteed, si aad ula qabsato BursaRay'a laba cagood oo galay kabo. Markii aan afduubno, waddooyinka ayaan ku murugaysan nahay. ”
Tan, sharraxaad ayaa ka timid geeskeenna Bursa Metropolitan Dawladda Hoose iyo Xidhiidhada Xiriirka Dadweynaha. Waxaan daabacayaa bayaankan si aan ugu wargaliyo muwaadiniinta Bursa.
Gacaliye Ayşe Aygör,
Maqaalka cinwaankiisu yahay ın BursaRay duullimaadyada waa in lagu fidiyaa 17 de ee khaanaddaada cinwaankeedu yahay 'Söz Xaquuqda Hadalka ah eeh' ee lagu daabacay joornaalka 'New Period' oo ku taariikhaysan 06 / 2012 / 02.00 ayaa lagu baaray cutubyada ay quseyso.
Bursaray waxay furan tahay inta u dhaxaysa 06: 00- 24: 00 saacadood. Xaaladaha qaaska ah sida Bursa Festival, qalliinka waa la kordhiyaa waqtiyo gaar ah. Waqtiga u dhexeeya 24: 00 iyo 06: 00 waa dayactirka wadada tareenka, boosteejooyinka, xariiqyada korantada iyo baabuur- ga. Sidaa darteed, Suuragal ma aha in la sameeyo kordhin. Waxaan soo bandhigi doonnaa macluumaadkaaga waxaana kuu rajeyneynaa shaqo wanaagsan.
Agaasimaha Saxaafadda iyo Xiriirka Dadweynaha
Beerta Dabeecadu waa hobo.
Xaafadda Karapınar waa mid ka mid ah meelaha aad loo dayacay ee Bursa. Uma adeegsan karno ku filan adeegyada degmada. Marka laga soo tago la'aanta kaabayaasha, jeermis-diidka iyo gaadiidkaba, dhawaanahan waxaan helnay iftiin. Nalalka ayaa ka dillaaca inta badan darbiyada jidadka iyo jidadka. Laakiin waxa ugu muhiimsan waa mugdiga beerta Dabeecadda taas oo wax weyn noo taraysa xilliga kuleylka. Sidoo kale waxaa jira dhibaato laydh oo ku jirta baarkinkan. Tani waxay sidoo kale ka dhigan tahay arrin amni. Habeenkii, caruusadu waxay rabaan inay ku qaboojiyaan baarkinada laakiin mugdi awgood macquul maahan. Waxay ahayd hobo meesha cabitaannada lagu kaydiyey kormeer la'aan awgeed. Codsigeenna ka socda UEDAŞ waa in aan iftiimiyo beertan sida ugu dhaqsaha badan. Sababtoo ah xaaladani waxay sidoo kale u abuuri kartaa fursado dadka xunxun. Mar labaad wadooyinka Quruxda Dabayshu waxay ku sugan yihiin xaalad aad u xun. Musqulaha oo aan lahayn bareeg yar Sababtoo ah biyuhu ma socdaan. Waxaan qiyaasayaa sababta oo ah qashinka inaan waligiis la qaadin, beerta qashinka loo rogay qashinka. Mr. Özgen Keskin, halkii aan ka qaban lahayn shaqo aan loo baahnayn anagoo ku hadlaya magaca, aan dhisno baagag iyo jardiinooyin carruurta halkaas oo aan kula neefsan karno qoyskiisa. Aniguna sidoo kale waan u soo gudbiyey, sidaa darteed ugu yaraan waxay soo celin doontaa meelaha hadda jira sida Nature Park Park
Akhriste aan rabin in magaciisa la shaaciyo
Suurtagalka ah in laga saaro caqabadaha xagjirnimada 1 (War-Saxaafadeed)
Nidaamka soo noqodka ah ee BursaRay ma bixin karo qiimaha gaadiidka caddaalad ah
Comsa SA ayaa ku guuleysatay hindisaha dhismaha mashruuca BURULAŞ Tram Line
Mashruuca Gargaarka Infrastructure GM Mashruuca Gargaarka Gawaarida Gawaarida ee Ankara Ankara KIK wuxuu diiday diidmada CAF SA ee natiijada hindisada ee bixinta maraakiibta maraakiibta 324